Laland : namoaka ny « Madagascar et le zébu » | NewsMada
Laland : namoaka ny « Madagascar et le zébu »
Miroborobo ny tontolon’ny fakana sary ankehitriny, saingy mbola hafa ny zava-bitan’ireo zoky, nitari-dalana tamin’izany ka anisan’ireny Rakotoarisoa Yves Rolland na i Laland. Vao namoaka boky ity mpanakanto mpakasary ity ka miompana tanteraka amin’ny tontolon’ny omby izany. Tsy sary fotsiny fa arahim-panazavana an-tsoratra no hita ao anatin’ilay boky, mitondra ny lohateny hoe « Madagascar et le zébu ».
Omby, biby azo lazaina ho mifamatotra amin’ny maha Malagasy, satria tsy afa-misaraka amin’ny andavanandrony sy amin’ireo fomba amam-panaony hatramin’izay. Heverina fa anisan’ireo antony nisafidianan’i Laland ny lohahevitr’ity boky fahatelony ity izany. Efa mikoriana ao anatin’i Laland tanteraka ny fitiavana maka sary ary azo tsapain-tanana ny maha matihanina azy.
Porofon’izany, tsy petatoko na vonjy tavanandro ny namolavolany ity boky ity fa efa tao anatin’ny telo taona mihitsy. Nitety an’i Madagasikara, avy any avaratra ka hatrany atsimo, izy tamin’ny fakana ny sary. Manome lanja an’i Madagasikara sy ny Malagasy ary ny kolontsainy manokana i Laland. « Antananarivo, patrimoine méconnu » ny lohatenin’ny bokiny voalohany ary « La grand livre des petits métiers » ny faharoa.